गर्मीमा बढ्न सक्छ स्वास्थ्य समस्या, कसरी बँच्ने? – Health Post Nepal
गर्मीमा बढ्न सक्छ स्वास्थ्य समस्या, कसरी बँच्ने?
२०७८ चैत ९ गते १४:०२
काठमाडौं–हिउँद सकिएसँगै दिनप्रतिदिन गर्मी बढिरहेको छ। तापक्रम वृद्धिको अवसर मानिसको स्वास्थ्यमा पनि देखिन थालेको छ। डिहाइड्रेसन, पाचनप्रणालीसँग सम्बन्धित समस्या, छालामा हुने सनबर्नजस्ता मौसमी स्वास्थ्य समस्याहरु यो बेला देखिन्छन्। यस्तोमा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ। गर्मीबाट हुने स्वास्थ्य समस्याबाट कसरी बँच्ने?